डा. गोबिन्द केसि तिमी मर्नु पर्छ ! | नेपालगन्ज टाइम्स
डा. गोबिन्द केसि तिमी मर्नु पर्छ !
संयोग जंग शाह
यो आलेखको शिर्षक देखेर कत्तिलाइ आत्मसन्तुष्टि मिल्यो होला । कतिपयलाई लाग्यो होला यो संयोग सायद पागल भयो । कतिपयले शिर्षक हेरेरै गाली दिन समेत पछि पर्नुभएन होला , सायद ।
तर यो सत्य हो , डा . केसि बाच्नु को अर्थ देख्न छोडिसकेको छु मैले , मेरो आँखाले । किन ? भन्ने प्रश्न नगरेकै बेसहुनेछ । किनकी उनलाइ हामिले नै मार्दै छौ , छिनिएको उनको हरेक स्वासप्रस्वासमा तपाईं हाम्रै देन छ ,उनलाइ मृत्युको मुखमा घसिट्नुमा ।
उनको माग के हुन ? त्यसको दुरगामी असर के हुनेछन् ? त्यसले जनतालाई प्रत्यक्ष या परोक्ष के कस्ता फाइदा पुग्ने छन्, त्यो म ब्याख्या गर्न चाहन्न किनकी हरेक दिनको हरेक अखबारका पन्ना , डिजिटल दुनियाका खबर ,टेलिभिजन र रेडियोले फुक्ने हरेक समाचारका खुराक नै उनै डाक्टर केसि र उनको आमरण अनशनकै सेरोफेरोमा घुमेको छ । घुम्दै छ र बिडम्बना अझै कतिन्जेल घुम्ने हो ।
त्यसैले मेरो भन्नू त यति हो कि डा. केसि तिमी बाचेर केही हुनेछैन , किनकी तिमिलाइ बाच्न नदिनेहरुकै देशमा डाडु र पनिउ छ । पुलिस र प्रशासन छ । उनिहरु तिमिलाइ मार्न हर सम्भव कोशिसमा छन् । त्यसैले तिमी मर्नु पर्छ । किनकी उनिहरु तिम्रो मृत्युको ध्वनि संगै ब्रम्हलुट गर्न गिद्दे नजर डुलाउदै छन् ।
तिमी किनपनी मर्नुपर्छ भने , तिमी सधै भन्दै आएका छौ नेपाली गरिब जनताले डाक्टर बन्न पाउनुपर्छ । गरिब निमुखा नेपालिले सस्तोमा स्वास्थ उपचार पाउनुपर्छ । कर्णाली जस्ता बिकट क्षेत्रले ठुला मेडिकल कलेज र हस्पिटल पाउनुपर्छ । तर डा . केसि तिमिलाइ के चाहिँ हेक्का रहेनछ भने यहाँ कोहि नेपाली जनता नै छैनन् । यहाँ त सबै कांग्रेस र कम्युनिष्ट छन् । पार्टिको खोल ओढेका कार्यकर्ता छन् । उनिहरु त पार्टिका रोबर्ट हुन् , त्यसैले उनिहरु तथा उनिहरुका छोराछोरी डाक्टर हुने सवाल नै छैन । उनिहरु बिरामी हुने सवाल नै छैन । त्यसैले त उनिहरु मौन छन् । त्यसैले त उनिहरु चुपचाप छन् ।त्यसैले त उनिहरु सत्यको लागि तिमी संगै बोल्ने आट गर्दैनन् ।
किनकी उनिहरु लाई सायद यी कुराहरुको कुनै आवश्यकता नै छैन । सायद ।
यी मेरा भावना हुन् । मात्र ब्यक्तिगत भावना । एक नेपाली नागरिक को । एउटा युवाको । कहिलेकाही लाग्छ यस्तो माहोलमा डा. केसि मात्रै हैनन उनी जस्ता बाच्नुको कुनै सार्थकता रहदैन । किनकी उनलाइ मार्न सरकार त लाग्दै छ नै तर हिजोको सरकार आज प्रतिपक्ष बनेर नितान्त सामाजिक न्यायको लडाइमा राजनिती घोलेर केसि लाई नै आरोप प्रत्यारोपको खेलमा घसिट्ने काम गर्दै छ । भोलि आजको सरकार प्रतिपक्ष बने उसले पनि त्यही खेल पक्कै खेल्ने छ । त्यसैले त एउटा नेपाली उखान यहि आएर सिद्द साबित भएको छ ‘जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको’ यो उखान त्यसै बनेको पक्कै हैन ।
नेपालमा सालै पिच्छे सरकार परिवर्तन हुनु , सरकार परिवर्तन संगै चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै डाक्टर गोबिन्द केसि आमरण अनशन बस्नु , प्रतिपक्षले केसिको पक्षमा माहोल तयार गर्नु र सरकार गोबिन्द केसिको माग पुरा गर्ने बाचा गर्दै सम्झौता गर्नु साधारण चक्र जस्तै बनेको छ । म मात्र आशा गर्न सक्छु यो चक्र यसपालि सधैको लागि तोडिएको होस् । पूरा नेपालिको माग सम्बोधन होस जुन गोबिन्द केसिले उठाएका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीमा एकताबद्ध हुन युवा नेता रसाइलीको आग्रह